Hevitra MPANOHARIANA | Jolay 2007 | 2
Resy ny fon-dray (Pety Rakotoniaina)
2007-07-20 @ 07:40 in Politika
Voasambotra Atoa Pety Rakotoniaina no ambentintenin’ny gazety maro teto an-tanàna. Ny mahavariana dia tsy nanisy resaka io mihitsy androany ny Le Quotidien izay fantatsika fa fananan’ny filoham-pirenena ankehitriny. Raha amin’ny fiheverana tsotra fotsiny amin’izao dia nahomby ny tetika nataon’ny mpiandraikitra io raharaha io tamin’ny fampitahorana sy fampisamborana ireo rehetra manodidina ity Ben’ny tanànan’i Fianarantsoa ambonivohitra ity. Efa nolazaiko tany aloha tany ny nisamborana ny vadiny izay mbola voatana any am-ponja aloha hatramin’izao raha tsy efa nisy ny fiovan-javatra taorian’ity fisamborana ity. Mbola vao ny andininy voalohany iny nisamborana ny vadiny toy ny takalon’aina iny.
Ahoana indray ny amin’ny zanany ? Mazava loatra fa tsy eo ny mpikarakara voalohany ny zanaka. Naseho gazety ny fitarainan’ny zaza ho tsy misy mpiahy. Ny antoko tambatra heveriko ho nanao izany dia nanao io fihetsika io hanehoana amin’ny mpiray firenena fa toy ny tsy mifaditrovana ihany ny mpitondra fanjakana. Ny ankilany indray zarany aza misy iny hiaka iny hanairana ilay ray voatery nandositra. Iza amin’ny Malagasy (na olombelona manana fo sy fanahy) no tsy hihovitrovitra manoloana ny fitarainan’ny zanaka ? Dia nifamonjy aloha ny mpiray antoko (Tambatr’i Madagasikara) hikarakara ireo zaza ireo. Fa olonkafa ve moa hahasolo ny tena ray aman-dreny ? Nahita ny fihetsiky ny antoko ny mpiandraikitra ny fitadiavana manokana an-dranamana dia nampiantsoina indray na notadiavina ihany koa ireo tena nanolo-tena hikarakara ny zaza. Ka iza no tsy ho vahotra ? Nanomboka hatreo dia ora sisa no nandrasana higadonan’ny rain’ny zaza !
Tsy maintsy nitsakotsako lalina tany antsain’ny ray ny manjo ny zanaka. Ny renin’ny zaza tsinona tazonin’ny manampahefana. Hatao ahoana ny hambom-po tamin’ny fihatsiana fa handoa avo roa heny ny vola nampanantenain’ny governemanta izy ? Iza no tsy mahalala ny tenany tamin’ny fahasahiana nananana ? Marina fa diso ny paika tamin’ny nampanantenan’ny Jeneraly Fidy ny hionganan’ny filoha nandritra ireny vanim-potoanan’ny fifidianana ho filoham-pirenena ireny. Raha notohizany izay nilofosany tahaka ny tamin’ny nananganana ny Tambatra nanerana an’i Madagasikara tsy ho toy ireny ny vato azony tamin’ireny fotoana ireny. Hay moa ka fipoahana tahaka ny fipiaky ny zozoro maina ihany no nataon’ilay Jeneraly mahery fo tamin’ny taona 2002. Ankehitriny, nitsonika ny hambom-po. Tsy tadiavina intsony fa andrasana. Voadona tany amin’ny naharary azy izy.
Na izany na tsy izany, nanahirana ireo nirahina hikaroka sy hisambotra azy ihany ny lehilahy. Nisy ihany ny fikorontanana teo amin’ny fitandroana ny filaminana sy ny fiandrianam-pirenena. Tamin’ilay namparatra polisy roa tao Behoririka saiky hisambotra jiolahy ireny ka Officier ny iray tsy tokony ho ny polisy misahana ny adi-heloka bevava mihitsy no hiandraikitra ny fisamborana fa ny polisy misahana ny fisamborana jiolahy. Saingy lany andro foana tany Fianarantsoa io sampan-draharaha farany io. Singa iray ihany izany mba entiko ilazana fa toy ny naato mihitsy aloha ny asa andavanandro hisamborana olona iray. Mampahatsiahy tampoka ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Robin Wood na mety azo atao hoe Robenan’ny Ala raha atao malagasy anarana io tantara io. Dia mbola lasa ihany ny eritreritra na dia izany aza hoe azo ampitahaina amin’io tantara vahiny io tokoa ve ity tranga misy eto Madagasikara amin’izao fotoana izao ity ?
Baobaba sa Ravinala?
2007-07-19 @ 07:24 in Toekarena
Mahavantana ny Malagasy rehafa manao sarim-pamantarana an’I Madagasikara eo amin’ny zavamaniry ny mametraka sarina ravinala. Vao tsy ela akory no nahenoako fa ny toerana be mpitsidika indrindra eto Madagasikara dia ny lalam-ben’ny Baobaba (allée de baobab) any Morondava any. Nisy aza moa mpitarika mpizahantany nanamarika fa ny Japoney rehefa tojo ireny Baobaba ireny dia sahala ny mahita andriamanitra mamihimpihina azy eo. Ary mihevitra ny maro amin’ny mpizahantany fa tsy nitsidika an’I Madagasikara raha tsy mahita Baobaba. Nianarana tany ampianarana rahateo fa misy karazany fito izy io eto Madagasikara raha tsy misy afa-tsy karazany tokana monja any Afrika.
Tsy tana ny eritreritra eo anatrehan’izany toe-javatra toa mifanohitra izany. Ataon’ny malagasy ho rehareha ny ravinala ary manamarika izany indrindra ny sary famantaran’ny lalaon’ny nosy fahafito hotanterahina tsy ho ela, toa tsy ao an-tsaina loatra mifanindran-dalana amin’izany ny Baobaba. Dia hoy aho hoe maninona moa mahafantatra io fitiavan’ny mpizahantany io raha mba misy sary famantarana zavamaniry hafa ihany koa ka tsy ambaniana mihitsy ny Baobaba fanintonanaireny vahiny ireny hitsidika an’I Madagasikara?
Lavo ny andrarezina
2007-07-16 @ 13:48 in Spaoro
Izay lohateny nataon’ny Vaovaontsika izay ihany no averiko etoana. Raraka teo amin’ny 1/16n’ny famaranana avokoa manko ny ekipa roa noheverin’ny mpanatrika fa hiatrika ny famarananana tamin’ny kitra fokontany. Efa nosoratako reo ekipa roa ireo dia ny Fc Andrady I sy ny FC Totoafo 67ha. Ny ekipa voalohany dia nahintsan’ny “Ny Mpiremby” tany amin’ny tifitra ifandimbiasana rehefa avy nanao ady sahala 1 noho ny 1.
Ny ekipa faharoa kosa dia lavon’ny Juventus Tsarafaritra (Tsimbazaza) 3 noho ny 1 be izao. Samy tany amin’ny fidirana faharoa avokoa ireo baolina tafiditra ireo. 67ha no nisantatra ny fampidirambaolina ka nanantena ny handany fotoana fotsiny avy eo. Kanjo tratran’ny patsa iray tsy omby vava fa nahatafidirana baolina 2 tao anatin’ny 2 minitra monja. Ny baolina fahatelo dia 5 minitra taorian’ny baolina faharoa. Ny tsy fahafantaran’ny Totoafo ny mpifanandrina taminy no lesoka lehibe nahavoa azy. Tsarafaritra anefa nahita ny filalaon’ny Totoafo tamin’ny fahitalavitra hatrany (Tsy dia nandeha mivantana tamin’ny fahitalavitra ny lalaon’I Tsarafaritra no tsy nahalalan’ny mpanazatra azy).
Ny mpiara-miasa amiko izay manan-janaka milalao amin’io Tsarafaritra io no nilaza tamiko fa efa zatra nibata ny amboara ity ekipa ity isaky ny misy ny fifaninanana ilalaovan-dry zareo any amin’ny faritra atsimo sy atsinanan’ny tanànan’Antananarivo.
Ady toeran'ny TIM
2007-07-12 @ 06:59 in Politika
ity ilay lahatsoratra tokony ho nivoaka omaly ary tsy nisy novaiko mihitsy.
Dia somary malazalaza indray moa ny fifanolanana eo amin’ny samy lohandohan’ny ao amin’ny antokon’ny filoham-pirenena. Dia tahaka ny azo tsorina hoe Atoa Razoharimihaja sy Ranjivason no tena mifampiandry kendritohina. Raha tamin’ny famalin’ny filoham-pirenena tamin’ny resaka tamin’ny mpanao gazety dia toy ny mahazo tombony ihany ny filohan’ny TIM ankehitriny. Raha jerena ihany koa dia tahaka ny mety ho latsaka ihany Atoa Ranjivason. Izao manko no lesoka amin’ity farany: Tao amin’ny antoko MFM ny lehilahy teo aloha. Manana ny fahaizany sy ny fomba fisainany ny ao amin’io antoko io fa misy koa ilay lazany amin’ny fanakorontanana. Fa izao kosa no heveriny ho tombony: Samy avy any Alaotra ry zalahy ka mihevitra ny hahasolo iray ilay minisitra teo aloha.
Na izany na tsy izany dia nisy lesoka lehibe ihany koa ny an’ny filohan’ny TIM ankehitriny. Teo aloha ny avy amin’ny hevitra nabosaky ny andaniny dia ny fanadinoana ilay zaikaben’ny antoko. Manaraka izany ihany koa dia naneho tsy fanarahana ny toetr’andro na ny filamatry ny filoha ny endri-tsaina narantiranty manerana ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena teo iny. Ny sarin’ny Madagasikara dia misy fizarana araka ny fari-piadidiana (faritany teo aloha) fa tsy araka ny faritra 22. Manaitra ny maso io toe-javatra io na dia mety heverin-dry zareo ho sary fotsiny amin’izao aza. MampanOntany tena manko hoe tena manaraka ny toromariky ny filoha tokoa ve ry zareo?
«Mialoha 1 2 3 Manaraka»